ခေတ်သစ်သားရေ Recliner Couch
ခေတ်မီ L ပုံသဏ္livingာန် living ည့်ခန်းသည်အီတလီစတိုင်အပိုင်း၏အိပ်ရာနှင့်ချိန်ညှိနိုင်သောခေါင်းစီးနှင့်သတ္တုခြေထောက်များပါရှိသည်. အသားရေနူးညံ့သောသားရေနှင့်အိတ်ကပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထိုင်ခုံသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ထိုင်ခုံကိုခံစားနိုင်သည်။ လူကြိုက်များသောကလေးငယ်ပြာရောင်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆိုဖာများသည်သင့် living ည့်ခန်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ပွဲဖြစ်သည်။.
ချိန်ညှိနိုင်သောခေါင်းစီးနှင့်သတ္တုခြေထောက်များပါ ၀ င်သည့်ခေတ်မီသားရေနားကပ်အပိုင်းအစအိပ်ချ်. အသားရေနူးညံ့သောသားရေနှင့်အိတ်ဆောင်နွေ ဦး နှင့်အတူထိုင်ခုံသည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ခံစားမှုသက်ရောက်သည်. လူကြိုက်များသောကလေးအပြာရောင်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆိုဖာများသည်သင်၏ living ည့်ခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်သည်.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ်အခန်း
ပစ္စည်း: သားရေ; ခရုမ်းခြေထောက်များ; အစိုင်အခဲသစ်သား&အထပ်သား; ရေမြှုပ်
ထုတ်ကုန်အမည်: ခေတ်သစ်သားရေ Recliner; L ပုံစံအိပ်ရာ; အပြာရောင်သားရေဆိုဖာ
အဖုံးပစ္စည်း: ထိပ်တန်းစပါးကိုသားရေ, PVC
function ကို: အပိုင်းဆိုဖာ
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 287L ကို * 220W * 79H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 292L ကို * 225W * 84H
Ergonomic Lounge ကုလားထိုင်